Ny fanjakan'ny marketing amin'ny atiny finday | Martech Zone
Ny fanjakan'ny marketing amin'ny atiny finday
Alatsinainy 18 Febroary 2013 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Jenn Lisak Golding
Miaraka amin'ny haitao rehetra misy ankehitriny, ny atiny dia lanina amin'ny fomba maro samihafa sy amin'ny fitaovana maro samihafa. Na dia mpilalao lehibe amin'ny lalao aza ny solosaina finday sy ny takelaka dia toa misy akony lehibe amin'ny tsindry amin'ny alàlan'ny isa sy ny fitetezana ireo fitaovana finday. Amin'ny 2013, ny marketing amin'ny atiny finday dia hiteraka famerenam-bola lehibe raha vita ara-dalàna.
Nanangona fikarohana avy tamin'ny izahay sehatra bilaogy orinasa mpanjifa, Compendium, ary rindrambaiko marketing marketing mpanjifa, ExactTarget, hanehoana ny fiantraikan'ny marketing amin'ny finday tao anatin'ny roa taona lasa sy izay mbola ho avy. Rehefa natambatra daholo ny angon-drakitra rehetra, dia nisy ny zavatra nahagaga:
Ny tahan'ny fisokafana amin'ny fitaovana finday dia nitombo 300% hatramin'ny Oktobra 2010 hatramin'ny Oktobra 2012.
Ny mailaka finday dia mamorona fiovam-po avo roa heny noho ny hetsika sosialy na fikarohana.
Mety tsy midika hoe “mandeha” ny finday. 51% n'ny mpampiasa finday amerikana no mizaha, mitady ary mividy amin'ny finday ao an-trano.
Ny fitsidihana an-tranonkala amin'ny finday na tablette dia avo indrindra amin'ny alakamisy 15.7%.
Nanjary nalaza kokoa ny fandefasan-kafatra amin'ny marketing amin'ny SMS, miaraka amin'ireo masoivoho 31.2% mampiasa izany tetika izany hampitomboana ny tsindry.
Manao ahoana ny toetoetran'ny marketing amin'ny atiny finday? Midira amin'ny lalao, na very ny fotoana azo atao amin'ny alàlan'ny tsindrio, fiovam-po ary fifamofoana.
Tags: fifandraisanamarketing amin'ny atiny findayfitaovana findaysms marketingHafatra marketing amin'ny SMStakela-bato
18 Feb 2013 tamin'ny 9:22 maraina
Mahavariana ny fotoana fisokafan'ny mailaka eo anelanelan'ny tetezamita finday sy birao! Toa mitsambikina eo amin'ny efijery malalantsika isika amin'ny maraina, nefa manomboka miverina miadana tsikelikely amin'ny finday. Oay!
18 Mey 2013 tamin'ny 2:51 hariva
Tena marina, Doug. Nahagaga ahy ihany koa ny fampiasantsika finday amin'ny fivezivezena (tsy ny SMS) fotsiny ao an-trano.
19 Mey 2013 tamin'ny 4:07 hariva
Hey Jenn, tena misy statistika mahaliana eto, tia azy. Nametraka fanontaniana manodidina an'io aho tany amin'ny London London tamin'ny taon-dasa, ka manontany tena hoe inona ny hevitrao / hevitra:
Na dia hitanao aza fa ny fiovam-po dia miorina amin'ny fitaovana finday ho an'ny fividianana sy ny ecommerce, manontany tena aho hoe manao ahoana ny statistikan'ny isan'ny isan'ny manokatra / mamaky mailaka nefa avy eo miova amin'ny birao, ka mampiasa teboka mikasika ny fiovam-po (koa ataovy sarotra izany hanaraka?). Faly - Russell
20 Feb 2013 tamin'ny 1:42 maraina
Hey Russell! Misaotra tamin'ny hevitrao. Heveriko fa fanontaniana lehibe izany, ary miady hevitra aho fa ny fitondrantenako manokana dia afaka maneho an'io (mijery azy amin'ny finday, fa mividy amin'ny birao).
Tsy manana ny statistika mora ampiasaina aho, fa efa niatrika an'io fanontaniana io aho teo aloha. Ireto ny eritreritro (bebe kokoa amin'ny fomba fijerin'ny psikolojia momba ny asa):
- Raha lavitra ny fampiononana ao an-tranonao sy ny latabatrao ianao dia heveriko fa efa lavitra be ny fiovam-po amin'ny fitaovana finday (fividianana). Vanim-potoana ahazoana fahafinaretana eo no ho eo isika, ary raha irintsika izany dia ataontsika ankehitriny. Raha tsy te hividy eo no ho eo isika dia mety manoritra na manangona azy amin'ny fomba sasany. Na izany aza, raha tsy tazomintsika ho filàna ilaina na tsy maintsy ilaina izany dia angamba hanadino isika ary tsy hiverina intsony raha tsy manaraka ny maripezintsika na manana fampahatsiahivana. Ny ankamaroan'ny orinasa B2C dia manana fampahatsiahivana amin'ny mailaka raha mametraka zavatra ao anaty harona fiantsenana isika, saingy hiezaka aho ny haminavina fa raha tsy nividy tamin'ny finday isika avy eo, dia angamba hividy azy amin'ny birao isika, na, indrisy fa ho an'ny mpivarotra dia tsy hividy mihitsy izahay.
- Raha ny fijerena ny fizahana dia eto no miditra ny automatisation marketing. Misy fitaovana ahafahanao manara-maso ny fahazarana mijery ny mpanjifanao sy mamorona profil ho an'ny mpanjifa. Raha mpividy taloha izy ireo dia mora kokoa ny manao an'io. Mety ho sarotra kokoa izany raha toa ka tsy mbola sokajiana ho prospect ao amin'ny rafitrao izy ireo.
- Moa ve ny teboka maro mikasika azy ireo manasarotra ny fanarahana ny fanovana? Eny. Antoka. Midika ve izany fa tsy azo atao izany? Tsia - mila fitaovana mandroso sy loharano voatokana fotsiny isika mba hananana fikorianam-potoana mety. Lafo be izany, fa amin'ny faran'ny andro dia mety hanampy amin'ny fitazonana sy fahatokiana izany.
Noho izany, amin'ny ankapobeny, tsia, tsy manana ny statistikan'ny fiovam-po aho na ny fitetezana finday sy ny takelaka, avy eo niova fo teo amin'ny birao, fa ny fanarahana ny fihetsiky ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny marketing automatisation dia tokony hanampy an'io. Misaotra! Raha mila resaka hafa ianao, dia aza misalasala manatona ao amin'ny Twitter: @jlisak.